Nisaritaka Ny Haino Aman-jery Japoney Taorian’ny ‘Naminanian’ny’ Mpamantatra ny Hoavy Hoe Hisy Horohorontany Mafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 12:52 GMT
Ny tanànan'i Kochi eo amin'ny morontsiraka Pasifikan'i Shikoku. Iray amin'ireo tanàna any amin'ny morotsiraka Pasifikan'i Japana izay mety ho rava taorian'ny faminaniana Horohorontany goavana hanjo ny LAvak'i Nankai Trough. Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Lasa niparitaka be tao amin'ny haino aman-jery sosialy japoney ny faminanian'ilay mpamantatra ny hoavy tamin'ny 23 Novambra hoe hisedra horohorontany lehibe ny morontsiraka atsimo andrefan'i Japana.
Nahazo laza kely tao amin'ny aterineto ilay mpamantatra ny hoavy, Matsubara Teruko, tamin'ny 2011 noho ilay “filazàny mialoha” ny horohorontany goavana hamely ny tanànan'i Rikuzentakata any avaratra andrefan'i Japana. Rikuzentakata dia iray amin'ireo tanàna izay saika rava noho ny tsonami lehibe iray nandrava ny morontsiraka avaratra-atsinanan'i Japana tamin'ny 11 Martsa 2011.
Tamin'ity indray mitoraka ity, nolazain'i Matsubara fa hitranga afaka anatin'ny andro vitsivitsy monja ilay horohorontany goavana nandrasana hatry ny ela nolazaina hanjo ny lavak'i Nakai.
Raha tsy tapaka manao faminaniana mialoha ny loza i Matsubara, ilay faminaniany hoe hitranga amin'ny 23 Novambra ilay horohorontany goavana dia nahazo vahana kosa tamin'ny haino aman-jery sosialy tao Nankai taorian'ny horohorontany nitranga tamin'ny 19 novambra tany atsimon'i Wakayama — faritr'i Nakai
Raha mitoka-monina ny faritra atsimon'i Wakayama ary mitohy mijotso mankany anatin'ny Ranomasimbe Pasifika, tsapa nanerana ny faritra be mponina any Kansai, izay ahitana ny tanànan'i Osaka sy Kobe ilay horohorontany.
Horohorontany tany amin'ny faritr'i Kansai: #vaovaohorohorontany (nanodidina ny 23:48)
Ivon'ny horohorontany: atsimon'i Wakayama; maridrefy 5.4 tamin'ny halalina 60 km, mardidrefy 4 amin'ny hamafin'ny horohorontany.
(Moa ve ity no fotoana voalohany nahatsapan’ ny faritr'i Kansai horohorontany lehibe toy izany?)
Namoaka sary vitsivitsy tamin'ny aterineto momba ny fahasimbana madinika sasantsasany nateraky ny horohorontany ny olona.
Ny teny hoe «lavak'i Nankai» (南海トラフ) koa dia nanomboka niely tao amin'ny fantson'ny haino aman-jery sosialy, anizan'izany ny tao amin'ny Twitter,, narahan'ny tsaho izay nilaza fa mety hisy horohorontany goavana kokoa hitranga ao amin'ny lavak'i Nankai ao anatin'ny tsy ampy ho herinandro iray akory, ny 23 Novambra 2016.
Noho ny antony vitsivitsy, lasa lohahevitra mafana ny olona iray naminany fa hisy horohorontany goavana hitranga ao amin'ny lavak'i Nankai amin'ny 23 Novambra, ary amin'izao fotoana izao, manontany ahy ny olona rehetra raha tena hitranga tokoa izany.
— Vaovao fanairana momba ny horohorontany goavana ao amin'ny lavak'i Nankai
Heverin'ireo manampahaizana fa mety hitranga amin'ny fotoana rehetra ny horohorontany goavana ao amin'ny lavak'i Nankai. Ny lavak'i Nankai dia toerana ikorisàn'ny takelaka iray eo ambanin'ny iray hafa izay mitohy tokony ho 900 kilometatra ivelan'ny morontsiraka atsimo antsinanan'i Japana, avy amin'ny faritr'i Tokyo mankany Shikoku. Ara-tantara, ny faritra izay ikorisàn'ny takelaka iray eo ambanin'ny iray hafa no miteraka ny horohorontany goavana miverimberina sy ny “tsonami” (horohoron-dranomasina).
Ilay horohorontany goavana nandrasana hatry ny ela tao amin'ny lavak'i Nankai dia manana hery ahafahana mandrava an'i Tokyo ary hatramin'ny fon'ny indostria ao Japana, izay mitohy manaraka ny morotsiraka. Maro amin'ireo morontsirak'i Japana mitoka-monina manamorona ny Pasifika, anisan'izany ny prefektiora ambanivohitr'i Wakayama sy Shikoku, dia mety ho tondraky ny onja goavam-ben'ny “tsonami” (horohoron-dranomasina).
Araka ny tsaho, heverina fa hitranga amin'ny “Alarobia Mainty” ilay loza.
Fampitandremana: manatona ny Alarobia Mainty! Hitranga amin'ny 23 Novambra ny horohorontany goavana ao amin'ny lavak'i Nankai!?! Niely io tsaho hafahafa io, ary rakotra feo tsy mampahazo aina ny aterineto.
Tsy ela, nanizingizina ireo mpampiasa Twitter sasany fa i Matsubara Teruko no nanomboka ilay tsaho. Ankoatra ny ‘filazàna mialoha‘ ny horohorotany tamin'ny taona 2011 sy ny tsonami, namoaka karazana boky fanampiana manokana ny tena miaraka amin'ny fahatsapana ara-panahy na Taona Vaovao i Matsubara .
Tsikaritr'i Naver ny ezak'i Mori-San (もりさん), mpampiasa Twitter, mba hahazo ny fototry ny tsaho. Naver dia sehatra bilaogy malaza izay mifantoka amin'ireo sary mahatsikaiky ety anaty haino aman-jery sosialy :
Hey, navoakan'i Naver ny bitsiko 🙂
Fandikana ny bitsika niaingàna: Tsy hafa fa ireo olona tsy diso tamin'ny faminavinàna mialoha ny horohorontany tany Tohoku tamin'ny 2011 ihany no milaza mialoha ankehitriny fa hitranga amin'ny 23 novambra ny horohorontany ao amin'ny lavak'i Nankai. Azontsika inoana ve izany faminaniany izany?
Nohainoana tamin-tahotra ny faminanian'i Matsubara hoe mety ho antomotra ilay horohorontany goavana ao amin'ny lavak'i Nankai. Bitsika iray tamin'ny 21 Oktobra izay milaza fa anatinà lalantsara iray no mitranga ireo horohorontany goavana — ary Nankai no manaraka — dia naverina nozaraina indray noho ny fahitàna ny fanambaran'i Matsubara momba ny horohorontany efa mananontanona:
Nahoana no misy tantara be tahaka izany ny momba ny horohorontany ao amin'ny lavak'i Nankai nitranga tamin'ny 23 Novambra? Ny antony dia satria Matsubara Teruko, izay nilaza mialoha ny horohorontany 3.11 tany Tohoku sy ny horohorontany Kumamoto no naminany fa ny “X-andro ” dia hitranga amin'ny 23 Novambra 2016.
Fa izao koa, jereo ity sary ity:
863 AD: Horohorontany tao Toyama sy Niigata [ tamin'ny vaninandro maoderina]
869: Horohorontany tany amin'ny ranomasina avaratr'i Japana
880: Horohorontany tao Kumamoto ( tamin'ny vaninandro maoderina)
887: Horohorontany goavana tao amin'ny Lavak'i Nankai
2007: Chu'etsu earthquake [in Niigata]…..Horohorontany Chu'etsu [tany Niigata]
2011: Horohorontany sy tsonami tany Tohoku
2016: Horohorontany tany Kumamoto
2016: Horohorontany tao Tottori [fanamarihana: Tottori miainga avy amin'ny modely]
Tsy ny rehetra no resy lahatra hoe ny 23 Novambra 2016 no hanamarika ny “Alarobia Mainty” sy ny horohorontany goavana ao amin'ny Lavak'i Nankai natahorana efa ela. Maro amin'ireo mpampiasa Twiter no nizara lahatsoratra iray tamin'ny Aprily 2016 avy amin'ny tranonkala iray antsoina hoe Chojogensho no nazotoki (超常現象の謎解き, “Famahana ny Zava-miafin'ny Tranga Mahagaga) izay nandiso ilay faminaniana malazan'i Matsubara momba ny horohorontany tamin'ny 2011 tany Tohoku.
Matsubara Teruko, izay naminany ny horohorontany tany Tohoku tamin'ny 2011, dia ohatra iray amin'ny filazana hoe ” na dia ny famantaranandro efa mijanona aza dia indroa manondro ny ora marina ao anatin'ny iray andro “. Inoy arakarak'izany ny faminaniany.
Marihan'ny lahatsoratra fa i Matsubara dia naminany hoe hisy horohorontany goavana hamotika ny ankamaroan'ny tanàndehibe ao amin'ny prefektioran'i Japana:
Ampahany amin'ilay lisitra lava be an'ireo tanàna Japoney nolazain'ny faminanian'i Matsubara fa hiharan'ny horohorontany tsy ho ela. Pikantsary avy amin'ny tranonkala 超常現象の謎解き.
Ao anatin'ny lisitra sy ny fahamarinan'ny faminanian'i Matsubara momba ny horohorontany tany Toholu tamin'ny 2011, hoy Chojogensho no nazoki:
Tena ho afaka hanatsoaka hevitra va isika hoe “naminany ny horohorontany tamin'ny 2011 tany Tohoku sy ny tsonami tokoa i Matsubara Teruko? Nanapa-kevitra handinika ireo toerana rehetra nanaovan'i Matsubara faminaniana fa hitrangan'ny horohorontany izahay mialohan'ny loza tany Tohoku tamin'ny 2011. Namoaka ny vokatry ny fikarohanay izahay ao amin'ity lisitra ity. Ny toerana rehetra izay nanaovan'i Matsubara faminaniana fa hisedra horohorontany dia nataonay lisitra (nojerena ireo faminaniana nanomboka tamin'ny 2005 hatramin'ny 15 febroary 2011 izahay).
Raha mijery amin'ity lisitra ity ianareo, mandrakotra ireo prefektiora rehetra miisa 47 any Japana ny faminanian'i Matsubara. Ary tsy indray mandeha fotsiny no voatonona ireo toerana fa im-betsaka. Ohatra, ny faritr'i Tohoku dia votonona in-120 tao anatin'ny enina taona nanomboka tamin'ny 2005. Nanomboka tamin'ny taona 2005, nanonona ny faritr'i Kanto (faritra iray lehibe ao afovoan'i Japana ahitana an'i Tokyo) mihoatra ny in-170 ny faminanian'i Matsubara.
Rikuzentakata sy Kamaishi, izy roa ireo izay nasongadina tao anatin'ny faminaniany momba ny loza tao Tohoku tamin'ny 2011 dia efa voalaza talohan'ny 2005.
Araka izany, “na dia ny famantaranandro efa mijanona aza dia indroa manondro ny ora marina ao anatin'ny iray andro”.
Raha marina ny faminanian'i Matsubara momba ny horohorontany goavana ny 23-n'ny Novambra tao amin'ny Lavak'i Nankai, mety ho tafiditra ao anatin'ny loza mandravarava i Japana. Na izany aza, zava-dehibe ny mahatsiaro fa na ny fikambanan'ny mpahay siansa aza tsy mahazo antoka raha ho tena marina avokoa ireo filazana mialoha momba ny horohorontany.